Anyị ga-anwa ịchekwa ma kwụsị njedebe nke azụmahịa na-abaghị uru, ma ọ bụ dị nabata ya wee gaa n'ihu? | FXCC Blog
Ndepụta Ịzụ ahịa Forex
Echiche nke Gap
Ụdị ahụ ka bụ enyi gị
Kpọọ oku oku
Anyị ga-anwa ịchekwa ma kwụsị njedebe nke azụmahịa na-abaghị uru, ma ọ bụ dị nabata ya wee gaa n'ihu?
Apr 25 • N'etiti ahịrị • 7790 Echiche • Comments Off na Anyi kwesiri igbaluta ma kwusi mmebi nke ahia nke mebiri, ma obu buru ya ma gaa n'ihu?
N'agbanyeghị otú anyị si zuo okè anyị kwenyere na ụzọ anyị si azụ ahịa bụ, n'agbanyeghị otú o si bụrụ na anyị kwenyesiri ike na atụmatụ anyị na-azụ ahịa bụ ndị ahịa (ọ ga-eme mgbe ụfọdụ) na ahịa nke 'na-aga ọjọọ' n'agbanyeghị anyị na-agbaso atụmatụ azụmahịa anyị ma na-arụ ọrụ aghụghọ anyị maka akwụkwọ ozi ahụ.
Ndị ahịa nwere ike ịga ọjọọ ozugbo na ntinye; ọ dịghị mgbe ọ bụla na-abawanye uru ma na-emegharị ngwa ngwa, ma ọ bụ na anyị nwere ike ịnweta ụdị nke teknụzụ. Anyị nwere ike ịnweta mgbaàmà ịbanye dịka akụkọ mmechi nnukwu nsogbu na-agbagha ma jide ya dị ka ihe nchedo na-achọghachi. Na mkpirikpi, enwere otutu ihe mere ahia di nma, ahia nke ana egbu dika ugbua ahia ayi, nwere ike ime ihe ojoo.
N'isiokwu a, anyị ga-elele ihe nchịkwa ndị anyị nwere ike itinye n'ọnọdụ iji chebe onwe anyị pụọ na ahịa na-aga njọ ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla mgbochi ọ bụla anyị nwere ike itinye na usoro azụmahịa anyị karịa ihe egwu egwu nke nwere ike inye aka. anyị na-ejedebe mmebi nke akaụntụ anyị.
Anyị ekwesịghị iche banyere "ịchekwa" ndị ahịa ọjọọ, ihe kachasị mma anyị nwere ike ime bụ imeghe na ịzụ ahịa
Ọ bụ ezie na ọ dị na ihu ya nkwupụta dị nnọọ mfe na e nwere ọtụtụ eziokwu na nghọta na nke a liner. A ghaghị mepee ahịa ma mechie ya dị ka atụmatụ nke atụmatụ ahịa anyị, ọ dịghị ahịa kwesịrị igbu ya n'azụ atụmatụ ahụ. Ihe kachasị mma anyị nwere ike ime bụ ịmeghe na ịzụ ahịa dịka akụkụ nke atụmatụ ahụ ma emesịa anyị dị nnọọ n 'ebere nke ahịa nke anyị na-enweghị ike ịchịkwa. Anyị nwere ike ịmetụta mgbanwe na ngwaahịa ndị anyị na-azụ ahịa anyị nwere ike ịchịkwa.
Anyị kwesịrị naanị ịzụ ahịa na anyị nwere 100% obi ike mgbe anyị na-adọta mkpalite ahụ
Ọ bụ ezie na naanị anyị na-azụ ahịa bụ 100% nabatara na atụmatụ anyị na dị ka ndị ahịa dị otú ahụ na anyị nwere 100% okwukwe na, a ga-enwe ahịa mgbe nile anyị na-achọta onwe anyị na anyị chọrọ ka anyị ejighị. Anyị enweghị ike ịzụ ahịa ndị kpamkpam 100% nwere ike ma ọ bụ ụfọdụ. Ya mere, anyị ga-abanye ahịa nke anyị chọrọ ka anyị ghara inwe ụfọdụ isi na ọrụ anyị. Mgbe anyị pịa na nkwenye nke iwu ahụ, anyị emeela ihe niile anyị nwere ike ime iji mee ka ihe ize ndụ dị na ihu ọma anyị nwere ọganihu kasị elu. Ọ bụrụ na anyị ekwenyeghị na anyị emeela nke a, mgbe ahụ, anyị ekwesịghị ịpịnye nkwenye iwu ahụ.
Na-enyocha ihe mere ahia ji aga n'ihu gị
Ka anyị tinye ọnọdụ n'ọnọdụ ndụ; anyị ka dị ugbu a, oge Aussie abanyela n'April afọ, n'ọnwa Eprel 4th. Otú ọ dị, mgbe ị na-ele ahịa ahụ na-aba uru bara ụba, dịka 100 pips, na-ele ụgwọ ọrụ taa, mgbe ọ gụchara mkparịta ụka dị mkpirikpi ọhụụ ma hụ uru anyị na-enweta ugbu a, anyị na-atụle ma ma ọ bụ ịkwụsị ahịa anyị ma tụlee mgbanwe nduzi ahia anyi. Mana ezigbo okwu ahụ bụ abụọ; ihe ngosi anyị iji kwụsị ọrụ anyị emeghị ka ọ bụrụ na anyị enwetaghị ihe mgbaàmà ọ bụla iji wepụ ahịa dị mkpirikpi. Ugbu a, 'a rapaara' anyị na ala mmadụ ọ bụla, ahịa ahụ amalitelarị ugbu a, mana erubeghị nkwụsịtụ anyị, ọ dịghịkwa ihe ndị anyị na-adabere maka mkpochapụ ahịa kpatara. Nke a bụ mgbe nkà ịzụ ahịa anyị nwere ezi uche na-ebuli elu. Anyị na-emechi ngwa ngwa ma wepụ ọnwụ ahụ, na-atụ anya na ahịa ahụ na-agbanye ma na-agbado ya, ma ọ bụ na-echere ka mgbaàmà anyị bịaruo nso?
Ịzụ ahịa na ala mmadụ ọ bụla
Anyị kwuru na mbụ okwu ahụ bụ "ala onye ọ bụla" na-ekwu banyere ịzụ ahịa, ihe anyị na-ekwu na nke a bụ ihe abụọ. Na-arụ ọrụ n'èzí nke atụmatụ azụmahịa anyị ma na-azụ ahịa ndị na-adabaghị na njirisi anyị na-etinye na atụmatụ ahụ, ma ọ bụ ịchọta onwe anyị 'ahia ahia' na obi abụọ ma anyị kwesịrị iji amamihe anyị mee ma ọ bụ ma ọ bụ na anyị agaghị eji aka anyị kwụsị ọrụ ahụ . Ya mere, azịza nke ụbụrụ anyị nke Aussie (na anyị nwere obi abụọ ugbu a) dịka ọ dị ugbu a n'ókèala na-adịghị mma ka a ghara ijide gị n'ala onye ọ bụla? Ee bụ azịza dị mkpirikpi. Anyị na-eji usoro atụmatụ ahia anyị gosipụtara imechi azụmahịa ahụ n'enweghị ihe ọ bụla ma na-echere nchebe anyị ka ọ dị mkpụmkpụ nche, ma ọ bụ na anyị na-egbochi aka na-enweghị oge, ihe anyị na-emeghị na-eme ka anyị kwụsị, trailing ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, chọsie ike na ahia ahu 'gaghachite' ayi.
Mara ihe ize ndụ anyị tupu anyị abanye
A ghaghị depụtapụta ihe ọ bụla ahịa ọ bụla tupu ewerere ahia. Anyị amaghị ihe ga-eme, ma anyị kwesịrị ịma ihe anyị ga-eme n'ime ihe ndị anyị nwere ike ime. Ọ dịghị mkpa iji "zọpụta" ihe ọ bụla anyị mere naanị ihe anyị zubere ime. Ezi ahịa bụ nke dabeere na usoro nke usoro anyị na ahia ọjọọ bụ nke anyị na-emebi iwu anyị n'ọbara. N'ụzọ ụfọdụ, ọbịbịa nke ahịa abụọ adịghị mkpa maka eziokwu ahụ ma ọ bụrụ na ha dị mma ma ọ bụ dị njọ.
Nanị ahịa ọjọọ dị adị bụ nke na-emegide iwu gị
Ọ bụ eziokwu na ahia mgbe ụfọdụ adịghị arụ ọrụ, ya mere, anyị na-emechi ahịa ahụ ma na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na anyị abanye na ahia dabere na iwu anyị, ọ bụ ezigbo ahịa. Ahịa ahụ na-eme ihe ọ chọrọ ime n'agbanyeghi ahia anyị. Anyị na-ahụ usoro nke iwu nke na-eme ka e nwee atụmanya ziri ezi na anyị na-azụ ya, anyị anaghị enweta ụzụ nke na-adịghị arụ ọrụ.
Ọ bụghị ahịa ọ bụla ga-emesị dị ka mmeri. Ma ọ bụghị onye mmeri ọ bụla bụ ezigbo ahia, ọ bụghị ahịa ọ bụla furu efu bụ ahịa ọjọọ. Anyị enweghị ike ịnye ego na ahia ọ bụla. Egbula igbochi ịla azụ ahịa. Mepụta iwu ma rapara ha n'ahụ. Ọ bụ naanị ụzọ ị ga-esi merie azụmahịa a.
" Nkwupụta na-enweghị ọrụ izu ụka na United States nke karịrị 24,000 dịka iwu siri ike na-ebili karịa ka a ga-atụ Ahịa ụlọ ahịa na-ebili elu na UK mgbe nnyefe nnyefe ego kwadoro »
Akwụkwọ ndị dị mma
Ịkọwapụta Nguzogide na Nkwado na Thomas DeMark's Pivot Calculator
Olee otú Heikin Ashi, Candlesticks ndị a na-akwụ ụgwọ, nwere ike isi nyere gị aka izere egwu na Forex Markets
39% nke Ndị ahịa Forex nwere Uru
Omume ego na 'chaa' na-eji opu oriọna Heikin Ashi, otú mfe nwere ike isi nwee mgbagwoju anya
Ajuju Ajuju Ajuju Banyere Akwukwo Ntuziaka nke AutoChartist
Tweets site na FxccForex
Lee ka egwu si di na udi ya di iche nwere ike imetụta ahia gi
Chebe onwe gị oge niile mgbe ị na-azụ FX
Etu ị ga-esi tinye atụmatụ usoro oge dị iche iche mgbe azụm FX
Ingnabata ihe ị nwere ike ijikwa mgbe azụ ahịa FX dị mkpa maka oganihu gị
Essfọdụ ihe dị mkpa iji tinye atụmatụ azụmaahịa gị
china mmanụ ego akụkọ kwa ụbọchị EUR EURGBP euro eurozone nsogbu eurozone debt Forex isiokwu ndị ọzọ ederede ahịa ahịa fxcc GBPUSD gold Greece ndị ahịa ahịa silver uk usa
Disclaimer: Ihe di n'ime ihe a bu nkwuputa ahia, ma obughi nduzi ego nke onwe ma obu nyocha.
Ihe omuma a bu maka ebumnuche ozi n'ozuzu (ma o bu ihe o bula). Enweghị ihe ọ bụla dị na ihe a (ma ọ bụ ka a ga-ewere dịka) iwu, ego, ego ma ọ bụ ndụmọdụ ndị ọzọ a ga-etinye na ndabere. Enweghị echiche e nyere na ihe ahụ bụ nkwenye sitere n'aka FX Central Clearing Ltd ma ọ bụ onye edemede na ego ọ bụla, nchedo, azụmahịa ma ọ bụ atụmatụ ego ga-adabara onye ọ bụla.
Ọ bụ ezie na akọwapụtara na ahịa ahịa a site na isi mmalite kwenyere na a pụrụ ịdabere na ya, FX Central Clearing Ltd anaghị eme nkwa ọ bụla maka eziokwu ya ma ọ bụ zuru ezu. Ozi niile na-egosi na ọ ga-agbanwe na-enweghị ọkwa na enwere ike ịpụ na ụbọchị n'oge ọ bụla. Ma FX Central Clearing Ltd ma ọ bụ onye edemede nke ihe a ga-enwe ụgwọ maka ọnwụ ọ bụla ị nwere ike imetụta, ma ọ bụ na-apụtaghị ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla, na-esite na ego ọ bụla dabere na ozi ọ bụla dị n'ime ebe a. Chọọ ndụmọdụ onwe onye ma ọ bụrụ na achọrọ
© 2020 FXCC Blog | Onye na-ere ahịa gị n'akụkụ gị
Kwadoro site na wordPress. Ezubere ya Vergo ™